Xildhibaan Fiqi: “Guddi ayaan u direynaa Galmudug | Baydhabo Online
Xildhibaan Fiqi: “Guddi ayaan u direynaa Galmudug
Xildhibaan Axmed Macallin Fiqi oo ka mid ah Xildhibaanada ka soo galay Maamul Goboleedka Galmudug ayaa sheegay in ay Guddi u saarayaan khilaafka Siyaasadeed ee ka jira Galmudug kaas oo sababay in Xildhibaannada Galmudug ay xilka qaadis ku sameeyaan Madaxweyne Guuleed.
Fiqi oo ah Guddoomiyaha Xildhibaannada labada aqal ee ka soo galay Galmudug ayaa sheegay in khilaafka ka taagan Galmudug ay ka dambeeyaan Musharrixiin ku fashilmay in ay Galmudug ka soo galaan kaddib markii ay fashilmeenna ay billaabeen in ay bur buriyaan Galmudug.
Waxaa uu sheegay in Guddiga ay u dirayaan ay diyaariyeen islamarkaana ay tagayaan Cadaado si ay u dejiyaan xiisadda Siyaasadeed ee hadda ka aloosan Cadaado.
Xildhibaanno gaaraya 54 oo ka mid ah Galmudug ayaa shalay ku dhawaaqay in ay xilka ka qaadeen Madaxweyne Guuleed.
C/Kariin oo Shirjaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in ay sharci darro tahay falka xilka qaadista lagula sameeyay waxaana uu ku tilmaamay in dad ku shiray maqaayado ku yaalla Cadaado ay ka dambeeyaan xilka qaadistiisa.